Tsy tonga nanotrona ny Seces Antananarivo : afa-po amin’ny fitakiana sendikaly ny Seces nasionaly | NewsMada
Tsy tonga nanotrona ny Seces Antananarivo : afa-po amin’ny fitakiana sendikaly ny Seces nasionaly
Mivaky roa ny fikambanan’ny mpampianatra mpikaroka eny amin’ny oniversite enina manerana ny Nosy. Andaniny, ny biraon’ny Seces nasionaly, etsy akilany ny Seces sampana Antananarivo tsy mankato ny fijoroan’ity birao vaovao ity.
Afa-po tamin’ny tohin’ny dinika niaraka amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony ny birao nasionaly mandrafitra ny fikambanan’ny mpampianatra mpikaroka (Seces) sy ireo solontenan’ny Seces any amin’ny faritany dimy, ankoatra ny eto Antananarivo, araka ny fanambaran’ny mpitondra tenin’ny Seces any Toamasina, Randrianandraina Noro, omaly teny Ankatso. “Amin’ny didim-panjakana telo momba ny fitakiana ny tambin-karaman’ny mpampianatra mikaroka, ny didy 2009-2015 momba ny “indemnité de recherche” ho an’ny mpampianatra mpikaroka efa misotro ronono sisa tsy tanteraka ary efa mizotra ny fifampidinihana mikasika izany”, hoy ny filohan’ny Seces nasionaly, Ralambomanana Dimby.
Taorian’ny ezaka nataon’ny mpikambana amin’ny birao nasionaly no nahazoana ny vokatra ankehitriny. Afaka nisitraka ny zo ireo mpampianatra. Miandry ny famahana ny olana momba ny tany an’ny oniversite nefa misy mibodo izy ireo, tao anatin’ny fanambaran’ny mpikambana amin’ny birao nasionaly.
Manameloka ny fihetsika fikasihan-tanana mpampianatra tany amin’ny oniversiten’i Mahajanga ny mpikambana. “Hetsika fitakiana vatsim-pianarana no nivadika ho fampisehoana herisetra ka tsy ekena mihitsy”, hoy ny fanamarihan’ny filohan’ny Seces sampana Mahajanga, Dona Victorien Bruno. Mamarana ny taom-pianarana 2016-2017 izy ireo ankehitriny. Any Toliara, taorian’ny fitokonana roa volana hiverina hiasa ny mpampianatra ny 5 febroary ho avy izao.
Tsy manan-kery ny fampiatoana
Momba ny filazana fampiatoana ny mpikambana telo ao amin’ny birao nasionaly tsy ho anisan’ny mpikambana intsony ao amin’ny Seces sampana Antananarivo, tsy ara-dalàna ny fanesorana azy ireo tsy ho mpikambana. Mbola mijanona ho tomponandraikitra feno ao amin’ny birao nasionaly izy ireo mandra-pahatonga ny kogresy nasionaly manaraka hotontosaina ny taona 2019 any Antsiranana, araka ny fanazavan’ny filohan’ny Seces nasionaly. Nampahafantatra rahateo izy fa hisy ny filankevitra nasionaly hotontosaina any Toliara handraisan’ny sampana Seces rehetra anjara handinihana lohahevitra maromaro ka anisany ny “obligation de service 200 h” tsy maintsy ataon’ny mpampianatra rehetra eny amin’ny oniversite. Tsy namaly ny fanasan’ny birao nasionaly ny Seces sampana Antananarivo nandritra ny fivoriana teny Ankatso, omaly.